JUVENTUS VS UDINESE: Shaxda & safafka ay galabta kusoo geli karaan! – Gool FM
(Torino) 11 Maarso 2018 – Waxaa galabta gegada Juventus Stadium ku kulmaya kooxaha Juventus vs Udinese, waxayna Juventus oo weli ku xarragoonaysa guushii Champions League doonaysaa inay daafaddaa iyo xooggaa ku wajahdo Serie A.
Dhanka Juve: Allegri ayaa dabaqi kara 4-2-3-1, waxaana khadka dhexe buuxinaya Bentancur iyo Khedira + Pjanic, iyadoo uu Matuidi kaydka fadhin doono. Waxaa daafaca kusoo noqon doona De Sciglio iyo Rugani, halka la nasin doono Buffon.
Dhanka Udinese: Waxaa ganaaxan Larsen, waxaa daafaca u diyaar ah Nuytinck. Perica, ayaa ka cadcad Maxi Lopez dhanka weerarka dhexe. Behrami oo soo laabtay ayaa bilowgiiba safan doona.
1 BUFFON, 16 PINSOGLIO, 4 BENATIA, 15 BARZAGLI, 8 MARCHISIO, 21 HÖWEDES, 27 STURARO, 5 PJANIC, 14 MATUIDI, 32 DEL FAVERO
22 SCUFFET, 25 BORSELLINI, 11 ZAMPANO, 23 HALLFREDSSON, 97 PEZZELLA, 10 DE PAUL, 23 INGELSSON, 21 PONTISSO, 99 BALIC, 20 MAXI LOPEZ
Alex Sandro, Lichtsteiner
Messi oo Baraha Bulshada soo dhigay Sawirkii ugu horreeyay ee Canugiisa cusub